प्रीटि जिन्टा र रानी मुखर्जीको बीचमा थियो गहिरो दोस्ती, तर किन टुट्यो सम्बन्ध ? | Ratopati
प्रीटि जिन्टा र रानी मुखर्जीको बीचमा थियो गहिरो दोस्ती, तर किन टुट्यो सम्बन्ध ?
एजेन्सी – बलिउडमा जति छिट्टो सम्बन्ध बन्छ त्यति नै छिट्टो टुट्छ पनि । फिल्म उद्योग एउटा परिवार हो तर यसमा गुट र उपगुटको षड्यन्त्र चल्ने गर्छ । अझ एउटै फिल्ममा दुई वा दुईभन्दा बढी अभिनेता तथा अभिनेत्री सामेल भएको खण्डमा एकअर्कासँग मनमुटाव शुरु हुन्छ । कहिलेकाँही भनिन्छ, अभिनेत्रीहरु एक अर्कासँग साथी नै बन्न सक्दैनन् । यद्यपि, बलिउडमा केही अभिनेत्रीहरुले यो भनाईलाई गलत साबित गरिदिएका छन् । जसमा रानी मुखर्जी र प्रीति जिन्टाको नाम आउँछ ।
विस्तारै रानी र प्रीतिको बीचमा दरार पैदा भयो । उनीहरु एकअर्कालाई एक अर्काको तारिफ सुन्न पनि गाह्रो हुन थाल्यो । यश चोपडाको फिल्ममा रानी र प्रीति चुनिन्थे । र, रानीलाई प्रीति उत्कृष्ट अभिनेत्री हुन् भनेर सुन्नमा नै डाह हुन थाल्यो । एक पटक रानीले खुलेरै दुई अभिनेत्रीबीच दोस्ती हुन नसक्ने बताएकी थिइन् ।
#बलिउड#प्रीति जिन्टा#रानी मुखर्जी